Explore the information and results of Bangladesh tour of Zimbabwe 2011/12. Read about Zimbabwe vs Bangladesh Test & ODI series, Bangladesh played one off Test match and five One-day international games in Zimbabwe from August 04-21, 2011
Result: Zimbabwe won only Test, and ODI series by 3-2
Zimbabwe won by 4 wickets (with 8.4 overs remaining)
Zimbabwe won by 7 wickets (with 5.5 overs remaining)
Bangladesh won by 6 wickets (with 13.2 overs remaining)
Teams Zimbabwe Bangladesh
Dates 4 August - 21 August 2011
Captains Brendan Taylor Shakib Al Hasan
Result Zimbabwe won the one-match series 1–0
Most runs Brendan Taylor (176) Mohammad Ashraful (112)
Most wickets Kyle Jarvis (5)
Brian Vitori (5) Rubel Hossain (3)
Player of the series Brendan Taylor (Zimbabwe)
Result Zimbabwe won the five-match series 3–2
Most runs Vusi Sibanda (242) Shakib Al Hasan (216)
Most wickets Brian Vitori (11) Rubel Hossain (11)
Player of the series Brian Vitori (Zimbabwe)
Shakib, Mahmudullah Sets up Consolation Win [+]
Bangladesh have pulled of a very convincing 93 run victory here in the final ODI at Bulawayo.
Bangladesh Finally Post First Victory in Zimbabwe [+]
Tamim Iqbal hit 61 and Rubel Hossain took 4-31 as Bangladesh salvaged some pride from its tour of Zimbabwe with a six-wicket win in the fourth ODI.
Bangladesh Elect to Bowl Against Zimbabwe in 4th ODI [+]
Bangladesh captain Shakib Al Hasan won the toss and chose to bowl in the fourth one-day international against Zimbabwe at Queens Sports Club.
Thrilling Win Gives Zimbabwe Series [+]
Mushfiqur Rahim's brilliant 101 from 100 balls was not enough as he fell in the last over to give Zimbabwe a five-run win over Bangladesh in the third ODI.
3rd ODI - Bangladesh Elect to Field Against Zimbabwe [+]
Bangladesh has won the toss and opted to bowl first in the third one-day international against Zimbabwe at Harare Sports Club on Tuesday.
Vitori Star as Zimbabwe Beat Bangladesh in 2nd ODI [+]
Zimbabwean paceman Brian Vitori's second successive five wickets haul as Zimbabwe win the 2nd ODI against Bangladesh at Harare, with seven wickets in hand.
Unchanged Zim Elect to Field Against Bangladesh [+]
Zimbabwe captain Brendan Taylor won the toss and elected to field in the second one-day international against Bangladesh at the Harare Sports Club on Sunday.
Debutant Vitori & Sibanda Set up Zimbabwe Win [+]
Brian Vitori became the first Zimbabwean to take five wickets on his one-day international debut and Vusi Sibanda made a cultured 96 as the home side beat Bangladesh by four wickets in the first of five ODIs.
1st ODI - Zimbabwe Elect to Field Against Bangladesh [+]
Zimbabwe captain Brendan Taylor won the toss and sent Bangladesh in to bat in the series-opening limited-overs international at the Harare Sports Club.
Zimbabwe Beat Bangladesh on Test Return [+]
Zimbabwe beat Bangladesh by 130 runs in a one-off Test on Monday to claim their first victory since making their return to cricket after a six-year absence.